Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 18/07/2019
(နေပြည်တော်၊ ၁၈-၇-၂၀၁၉ ရက်)
Union Minister U Thein Swe received the delegation led by Mrs. Christine Schraner Burgener, the United Nations Secretary-General’s Special Envoy on Myanmar, on 17 July 2019 in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they exchanged views on matters relating to the developments in Rakhine State witnessed by the delegation during their observation tour there; the issuance of NV Cards to persons in the citizenship scrutiny process, and completion of the issuance of NV Cards nationwide; the teamwork of relevant government departments to issue NV Cards in Maungdaw Township; the Government’s efforts to establish good relations between the two communities in Rakhine State; the implementations in conjunction with the signing ofaMoU between the Ministry and UNDP, UNHCR on the repatriation process; concerns and fears of the displaced persons who are unaware of the true efforts of the Myanmar Government; access to accurate information and realization of the acceptance process for the displaced persons; conducting meetings between Myanmar and Bangladesh for repatriation process, recognition by the Special Envoy to the government’s efforts in promoting peace, stability and development in the Rakhine State and programmes to provide further assistances.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေသည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christine Scharaner Burgener နှင့် အဖွဲ့အား ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မြင်တွေ့သိရှိခဲ့မှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးမှုနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် NV Card ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု၊ မောင်တောမြို့နယ်၌ ဝန်ထမ်းများစုဖွဲ့အခြေပြု၍ NV Card ထုတ်ပေးနေမှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အဆင်ပြေစွာ ဆက်ဆံနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် UNDP ၊ UNHCR တို့ကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်နေမှု၊ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများအနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မှန်ကန်စွာ သိရှိခြင်းမရှိဘဲ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများရှိနေမှု၊ မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရေးနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု ၊ ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ အစည်းအဝေးများကျင်းပကာ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် သိရှိနားလည်အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။